‘सारेगमप’ मा प्रितमको चमत्कार, जज नै भए कायल – भिडियो हेर्नुहोस् – tvNepali.net
तपाईले प्रितमले भारतिय टेलिभिजनमा गाएको हेर्नु भएको छ कि छैन ?
चर्चित भारतीय रियालिटी शो सारेगमप लिटिल च्याम्समा नेपालका बालक प्रितम आचार्यले आज पनि आफनो धमाकेदार प्रस्तुती दिएका छन् । पछिल्लो समय लगातार चार्ट बस्टर पफर्मेन्स दिईरहेका प्रितमले आज पनि उत्कृष्ट प्रस्तुती दिँदै जुरीबाट सय प्रतिशत नम्बर ल्याएका छन् ।
उनले आज ‘दिवाना’ फिल्ममा समाबेश कुमार सानुले गाएको गीत “सोचेङगे तुम्हे प्यार” गीत गाएका थिए । उनले सो गीत यति कर्णप्रिय तरिकाले गाए की जज तथा जुरीबाट उनले स्ट्याण्टिङ ओभिएसन नै दिए । आज अतिथी बनेर आएका चर्चित संगितकार हिमेश रेशमियाले प्रितमको खुलेर प्रशंसा गरे ।
उनले कुमार सानुको गीतमा उदितको छबी दिँदै गाएको अहिलेसम्मै नदेखेको भन्दै प्रितमको प्रशंसाको पुल नै बाधे । जज ऋचा शर्माले पनि प्रितमले अझै आफनो चमत्कार देखाउन बाँकी नै रहेको बताए ।
अन्य जज सान र अमाल मल्लिकले पनि प्रितमको गायिकीको प्रशंसा गरे । पछिल्लो समय शोमा प्रितमको प्रस्तुती झनै निखारिदै आएको छ । जसले नेपालीसंगै भारतीयहरुको समेत मन जित्दै आएका छन् । इटहरीका ११ बर्षका यी बालकले नेपाल र नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
उनले बिदेशी भुमिमा देशकै नाम चम्काईरहदा हरेक नेपालीहरुले उनीप्रति गर्व महसुस गरिरहेका छन् । यस अगाडी नेपालका विभिन्न गायक गायीका तथा डान्सरहरु भारत गएर आफ्नो कला देखाइसकेका छन् ।
प्रितम सानै छन् । उनले पाएको यो उपलब्धी वास्तवमै तारिफ योग्य छ । उनी उपाधि लिएर वा नलिइकन फर्किए पनि उनले निकै राम्रो सुरुवात भने गरिसकेका छन् ।
यो प्रोफाइलमा गएर भिडियो हेर्नुहोस्
प्रितमको भिडियो हेरिसक्नु भयो भने तपाईको जानकारीका लागि
शाकाहारी हुनु मुटुका लागि फाइदाजनक छ । तर नियन्त्रित रूपमा माछा मासु खाएमा हानि हुँदैन । खसी, राँगो, बंगुरको मासुले कोलेस्टेरोल धेरै बढाउँछ ।
माछा र कुखुराको मासुले कम बढाउँछ । चिल्लो नराखी माछा र कुखुराको मासु पकाउने तरिका सिक्नुपर्छ । यस्तो खानाले हानि गर्दैन । माछामासु बिहान र दिउँसोको खानामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । बेलुकी माछा मासु नखानु नै उत्तम हुन्छ ।
६.खानेभाँडाहरू जनावरहरूलाई चाट्न नदिनुहोस्। भरसक जनावरहरूलाई भान्छाकोठामा पस्न नदिनुहोस् । बिग्रिएको खाने कुरा तुरुन्तै फाल्नुहोस ।
PreviousPrevious post:चिया पिउँनुहुन्छ ? जुन चिया पिए पनि पढ्नुहोस्, काम लाग्छ
Next Next post:कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? फोटोले खुलाएको रहस्य